Sei kubereka pasina misodzi? Preparation vakadzi chokusunungukira
Utano, Vakadzi utano
Mipfumbamwe mukadzi akashanyira nokufunganya zhinji, nechokwadi. Uye pasina, vaongorori vanoti kuti vanhu vanogona kushivirira kusvika 45 Del (zviumbu) kurwadziwa, uye mukadzi kubereka chinoenda kuburikidza "kunzwa" akaenzana 57 Del. Zvinoshamisa, pashure pakuonekwa mbudzana mai vatsva chiedza nokukurumidza kukanganwa kurwadziwa. Kubereka - wechisikigo muitiro, asi kazhinji havagoni kunzvenga zvimwe dambudziko, zvakadai hwatsvuka. Chokwadi, ichi hachisi yakaipisisa chinhu chinogona kuitika. Zvisinei, kana iwe unogona kudzivisa kwavari, ipapo tadii aivabatsira muitiro yokusununguka. Saka ngationei, sei kubereka pasina misodzi.
Kune vamwe vakadzi vari inokonzerwa mumwe ezvinhu ari zvakaoma kudzivisa dambudziko iri. ezvinhu akadaro dzinosanganisira:
Kuvapo kwevhu (kana kungoti akazivisawo kubatwa);
kana varipo zvinotapukira, anogumbura zvirwere nhengo dzokubereka nadzo;
kana amai anotarisira mwana guru;
kana paiva makatsemuka, Anoparadza munguva yapfuura kuberekwa;
kana pane simba nokutya yokusununguka.
Kuti tinzwisise sei kudzivisa hwatsvuka mukubereka, vanofanira kuziva kuti chitarisiko chavo imhaka kushayikwa elasticity kuti munyama. Naizvozvo, dziviriro inofanira zvainanga nani wayo.
Sei kubereka pasina misodzi? Zviito vasati pamuviri
Panongopera chisarudzo nokukurumidza mhuri zadzai, vanofanira nekuporesa zvirwere zvose zvine chokuita Gynecology. Uyu chinodiwa kusika akanaka ezvinhu nokuda gestation uye kuberekwa mwana ane utano. Studies ichiitwa Panguva iyi, zvakare, unogona kuva inokosha mune izvi. Somuenzaniso, kolkoskopiya kubatsira kuziva remuromo Kuparara.
Achishaya kuti kuzvara pasina dzongonyedzo, Zvinokurudzirwa tinyatsoziva Kegel kurovedza. Dzinovakwa nenzira kuti perineal tsandanyama wokutanga akachekwa, ipapo faranuka. Izvi zvichaita kwete chete kuvandudza upenyu zvepabonde, asiwo kusimbisa pelvic netsandanyama.
Sei kubereka pasina misodzi? Zviito panguva pamuviri
About pamusoro muviri harufaniri kukanganwika mumwedzi mipfumbamwe nokumirira. Unofanirawo kuita nyore muviri.
Kufamba munzvimbo imwe. Zvinofanira nokusimudza hudyu zvinobvira.
Imi hwatata nemabvi yakafara kunze kumativi anogona. chinzvimbo ichi achagara kwenguva masekonzi mashoma. Unogona kusununguka kana bhora kana chitubu.
kwiza ari perineum
Asi nzira inonyatsobudirira yokuita, vachibatsira kubereka pasina misodzi iri kwiza yacho perineum. Tanga kuti vaite zvakanaka pamwe mavhiki 28. Chokutanga, zvakakwana kuita kamwe pamazuva manomwe, ichiwedzera zvishoma nezvishoma Frequency kusvikira nguva nomwe pavhiki (pamberi pakukurukura).
First ndiko kugeza maoko ako, kuparadzira nyinyo, labia, nemimwe namafuta kana chinokosha cream. Unofanira kupinda kudzika munwe munzvimbo nyinyo kutsikirira pamusoro musana pamadziro. Unofanira kutsikirira kusvikira kusvikira unonzwa kusawirirana uye tingling. Panyaya iyi, mukadzi pachake kuzorora nani. Izvi zvinoteverwa saizvozvo kukanganisa labia. On yose nzira inofanira kutora anenge mashanu maminitsi
Sei kubereka pasina misodzi? Behavior anosurumuka
Nokuti vaya vanoda kubereka pasina misodzi, chikuru kuzvitonga kutevedza zvose zvinodiwa, iyo kumanikidza gayinakorojisiti uye obstetrician pakusununguka. Somuenzaniso, regai kuedza, kana iwe ngaandidzivise kuita, uye panguva imwecheteyo tinofanira kuedza kuita panguva mukuedza nokutamburira.
How nengozi ndiko kusiya ari kusangana nekutsi kwemukadzi masvingo?
The hunhu uye unhu vasikana pamwedzi
Nzira pamuviri vakadzi. Nzira nokuti chizvarwa chitsva pamuviri
Vaginosis mu pamuviri: Zvinokonzera uye Zviratidzo
Sei dumbu anorwadziwa, asi hapana pamwedzi? Chikonzero uye kushanda
The nenzvimbo chinzvimbo Canada. Features dzinongoitika ezvinhu
Aongorore dumbu: rondedzero maitirwo ezvinhu wongororo
"Ginos": mirayiridzo kushandiswa, dzomuzana chaiwo
Sezvinoratidzwa yeyero womumhuri pamusoro zvikabudura?
Yoga Philosophy nokuti Beginners
Allergies pakurapwa hwomwana uye ayo zvinokonzera
Actress Diana Maximova: Biography, firimu basa uye upenyu pachako
Strawberry zvirwere: chii chinofanira kuva kutya Chikwata?
Air makeke - rinotapira uye inonhuwirira dhizeti kumba
The best graphic editors. Kuenzanisa
Maria Fomina - mutambi ane ramangwana kukuru
How kubvisa ndebvu musikana pamba